६०-६४ बर्षकोलाई चिनियाँ खोप जेठ २५ देखि। – कर्णाली 24 डट कम
६०-६४ बर्षकोलाई चिनियाँ खोप जेठ २५ देखि।
Karnali 24१९ जेष्ठ २०७८, बुधबार १५:२२
सरकारले यही जेठ २५ गतेदेखि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । चीनबाट खोप प्राप्त भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार मंगलबार मात्र चीनबाट नौ लाख हजार मात्रा ‘भेरोसेल’ खोप आएको र आज थप एक लाख मात्रा तिब्बत सरकारबाट आउन थालेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङ्बीच केही दिनअघिको टेलिफोन वार्ता भएपछि चीन सरकारले अनुदानमा खोप उपलब्ध गराएको हो । प्रवक्ता डा. पौडेलले खोपको दोस्रो मात्रा सुनिश्चित गरेर मात्र ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप प्रदान गरिने बताए ।
उनले ज्येष्ठ नागरिकसँग चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका १८ वर्षभन्दा माथिका लागि पनि खोप दिइने जानकारी दिए। ६० देखि ६४ उमेर समूहका खोप लगाउने करीब आठ लाख जनसङ्ख्या रहेको छ ।
नेपालगञ्ज-कोहलपुर सडकखण्डमा ज्यानै लान सक्ने ठाडो किलाहरु (भिडियो सहित)
२४ असार २०७८, बिहीबार २२:२२
१० कार्तिक २०७८, बुधबार २१:२४
त्रिशूलीको पक्की पुल हावाहुरीले उडाएपछि…
५ बैशाख २०७८, आईतवार ११:३२
पशुपतिनाथ र राम मन्दिरका लागि बजेट
१५ जेष्ठ २०७८, शनिबार १९:४३
दु:खकाे खबर मन्त्री पुनकाे स्वास्थ खस्किदाे १९ जेष्ठ २०७८, बुधबार १५:२२
काङ्ग्रेसको बर्दिया जिल्ला क्षेत्र नं २ मा चुनावी गर्मी(भिडियो सहित) १९ जेष्ठ २०७८, बुधबार १५:२२
एमाले महाधिवेशन चितवन हिँडेको गाडीमा बिचमै ढुङ्गा प्र’हार गरि राेकियाे १९ जेष्ठ २०७८, बुधबार १५:२२